January 2011 | TechSectors
Google က ဒီနေ့ပဲ desktop notifications ဆိုတဲ့ Gmail အတွက် feature အသစ်ထပ်ထုတ်လိုက်တယ် - ရည်ရွယ်ချက်က ကိုယ့် Mail box ထဲကို Email ရောက်လာရင် ဒါမှမဟုတ် တစ်ယောက်ယောက်က instant messages ကိုယ့်ဆီ ပို့ထားရင် အရင်ကဆို Gmail notifier တို့ - Mozilla firefox add-ons ထဲက Gmail Notifier add-ons တို့ - Google toolbar တို့ ဆိုတာမျိုး စသဖြင့် မသုံးထားရင် ကိုယ့် Mail ထဲကို စာဝင်နေမှန်း - ကိုယ့်ဆီကို တစ်ယောက်ယောက်က instant messages ပို့ထားမှန်း အချိန်နဲ့ တပြေးညီ မသိနိုင်ဘူး - ခုတော့ Google က Gmail users တွေရဲ့ ဒီလိုအပ်ချက်ကို သိလို့ တစ်ခြား add-ons တွေ ဘာညာသာဓကာ အပိုစာသားတွေ မသုံးရအောင် desktop notifications ဆိုပြီး Gmail ထဲမှာ ထည့်ပေးလိုက်တယ် -
လုပ်ဆောင်ပုံကတော့ အထက်ဖော်ပြပါအတိုင်း Gmail ထဲကို ဝင် - ညာဘက်ခြမ်း အပေါ်ထောင့်မှာ ရှိနေတဲ့ Settings link ကို Click ပေးပြီး - General tab အောက်က Desktop Notifications: မှာ အောက်မှာရှိနေတဲ့ ဖော်ပြပါ နေရာနှစ်ခုကို Select လုပ်ပေးပြီး Save changes လုပ်ယုံပါပဲ -
ဒါကလည်း ကျွန်တော့် အနေနဲ့ Rule အရ ပြောတာပါ - တကယ်တမ်း မိသားစုဝင်တွေအနေနဲ့ ကိုယ့်ဆီရောက်လာတာတွေထဲက chat messages ကိုပဲ Notifications လုပ်စေချင်လဲ ရသလို - Priority Inbox သုံးတဲ့သူဆိုရင်လည်း ကိုယ့်အတွက်အရေးကြီးတဲ့ messages ကိုပဲ Notifications လုပ်ထားလို့ ရပါတယ် - Settings ကို အဲ့ကနေပဲ စိတ်ကြိုက် ပြင်ဆင်ထားလို့ ရပါတယ် - လောလောဆယ် အခြေအနေမှာတော့ ဒီ Desktop Notifications ဟာ HTML5 support ပေးတဲ့ Google Chrome မှာပဲ အလုပ်လုပ်ပါသေးတယ် - ဒါပေမယ့် HTML5 support ပေးတဲ့ တစ်ခြား browsers တွေ ( Firefox4- Internet Explorer9) မှာလည်း ဒီ feature အလုပ်လုပ်နိုင်ဖို့ Google က လတ်တလော ပြင်ဆင်နေပါတယ် - Settings ထဲမှာ အားလုံး ပြင်ဆင်ပြီးသွားရင် မြင်ရမယ့် Desktop Notifications ပုံစံက အောက်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ အတိုင်းပါ -
ကျွန်တော့်စိတ်ထင်တော့ Google Chrome ရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်ကို Users တွေ သတိထားမိအောင် Google က တစ်ဖက်လှည့်နဲ့ ပွဲထုတ်တာလားတော့ မပြောတတ်ဘူး - ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် Chrome users တွေ အတွက်တော့ အားသာချက် တစ်ခုရလို့ ကျွန်တော်တော့ သဘောကျမိတာ အမှန်ပါပဲ -
4:35 AM LeaveaComment
ဒီနေ့ ကျွန်တော် မိတ်ဆက်ပေးချင်တာ တစ်ခါသုံး Email Services တွေ အကြောင်းပါ - ဒီအကြောင်းက ကျွန်တော်တို့ မိသားစုဝင်တွေနဲ့ သိပ်အများကြီး မစိမ်း လောက်ဘူးလို့ ထင်မိတယ် – ဘာကြောင့်လဲဆို ဒီ တစ်ခါသုံး Email services တွေ အကြောင်းက ချစ်သမီးသို့ ပေးစာများ မှာရော - တစ်ခြား ကျွန်တော်ရေးခဲ့ဖူးတဲ့ အကြောင်းအရာ တစ်ချို့မှာပါ မကြာခဏဆိုသလို တွဲပြီး ဖော်ပြခဲ့ဖူးပါတယ် – မှတ်မိကြလိမ့်မယ် ထင်ပါတယ် – 10minutemail ဆိုတာ - အခု ဆွေးနွေးချင်တဲ့ တစ်ခါသုံး Email Services တွေ ဆိုတာလည်း 10minutemail လိုမျိုးပဲ – အရင်က ပြောခဲ့ဖူးတယ်ဆိုပေမယ့် တစ်ချို့က ခုမှ စဖတ်မိတာမျိုး ဖြစ်နိုင်တာမို့လို့ သူ့ရဲ့ သဘောတရားကို နည်းနည်းလေး အကျဉ်းချုံးပြီး ပြန်ရှင်းပြချင် ပါသေးတယ် -
ဘာကြောင့် တစ်ခါသုံး Email Services တွေ အသုံးပြုသင့်သလဲ ??
အင်တာနက်ကို ခုမှ စတင် အသုံးပြုသူဖြစ်ဖြစ် – အသုံးပြုတာ အကျွမ်းတဝင် ဖြစ်နေသူတွေ ပဲဖြစ်ဖြစ် နေ့စဉ်လည်ပတ်နေကျ အင်တာနက်လမ်းကြောင်းမှာ လူတိုင်းနီးပါး ဖိုရမ်တွေ – Websites တွေ ဆိုတာနဲ့ ပတ်သတ်ဆက်နွယ်နေကြရတယ် – တစ်ခုခု လိုချင်တာရှိရင် ( MP3, Ebooks, Videos, Software စသဖြင့် ) ဘာပဲလိုလို ဒီဖိုရမ်တွေ – Websites တွေကနေပဲ ကျွန်တော်တို့ ရှာယူကြရတာ မလား – ဒါပေမယ့် တစ်ခုရှိတာ ဖိုရမ်တော်တော်များများနဲ့ Websites တော်တော်များများဟာ ဝင်ချင်တိုင်းဝင် ထွက်ချင်တိုင်းထွက် ခွင့်မပြုပါဘူး – တစ်ခုခု ရှာချင်တယ် – Registration လုပ်ရတယ် – တစ်ခုခု Download ချချင်တယ် – ဒါဆို Registration လုပ်ခိုင်းတယ် – စသဖြင့် ကိုယ့်ဘက်က လိုလားချက် တစ်ခုအတွက် ကိုယ့်ရဲ့ ပိုင်ဆိုင်မှု ( Email address ) တစ်ခုကို ပြန်ပေးကြရတယ် – အဲ့လို Registration လုပ်တဲ့ အချိန်မှာ ကိုယ့်ဘက်က Email address တစ်ခုပေးမှ Registration confirmation link တစ်ခုကို ကိုယ့် Mail Address ထဲ အဲ့ဒီ့ Websites သို့မဟုတ် ဖိုရမ်ကနေ ပြန်ပို့ပေးပြီး ကိုယ့် Mail စစ်မှန်ကြောင်း အတည်ပြုခိုင်းတယ် - အဲလိုနဲ့ ကိုယ်ပိုင်ဆိုင်တဲ့ Personal Email Address တစ်ခုက ကိုယ်မရည်ရွယ်ထားတဲ့ တတိယလူကို ပေးမိလျက်သား ဖြစ်သွားတယ် – ပုံမှန်အားဖြင့် Registration process တစ်ခုက ဒီလောက်နဲ့ ပြီးသွားပေမယ့် တစ်ချို့ ဖိုရမ်တွေ – Websites တွေကတော့ Registration process ရဲ့ နောက်မှာ Marketing process ကိုပါ ဆက်ပြီး လုပ်ဆောင်ကြပါတယ် - ဆိုလိုတာ Users တွေဆီက ရလာတဲ့ Email address တွေကို Websites owner တွေ – ဖိုရမ်ကြီးကြပ် တည်ထောင်သူတွေ ( ကျွန်တော်တို့ ဖိုရမ်မပါ ) ကနေပြီး အရောင်းမြှင့်တင်ရေးအတွက် Email address ဝယ်ယူသူတွေဆီ ပြန်ပြီး ရောင်းစားကြတယ် -အဲ့လိုနဲ့ ကျွန်တော်တို့အယုံလွယ်ခဲ့တဲ့ ဖိုရမ်တွေ - Websites တွေကနေပြီး နောက်ထပ် နောက်ထပ် ကိုယ်နဲ့ မသိသူတွေထိပါ ကိုယ့်ရဲ့ Personal Email Address က ပြန့်သွားတယ် – ရလာဒ်ကတော့ အဲ့လိုမျိုး ရည်ရွယ်ချက် မကောင်းတဲ့ ဖိုရမ်တွေမှာ ကိုယ်က ဘုမသိ ဘမသိနဲ့ Registration လုပ်ပြီးနောက်ပိုင်း ကိုယ့် Email ထဲကို ဘယ်ကမှန်း ဘယ်သူ့ဆီကမှန်း မသိတဲ့ Mails တွေ စဝင်လာမယ် – စစချင်းတစ်စောင်စ နှစ်စောင်စကနေ နောက်ပိုင်း တစ်နေ့တစ်နေ့ ရာနဲ့ချီတဲ့ အထိ ဘယ်ကမှန်း မသိတဲ့ Emails တွေ ဝင်လာတာခံရမယ် – ကိုယ်က ဘာမှန်းညာမှန်း မသိပဲ အဲ့လိုမျိုး စာတွေမှာ ပါလာတတ်တဲ့ Attachments တွေကို ဖွင့်ရင်းကနေ ကိုယ့် ကွန်ပြူတာမှာ Virus ကိုက်ခံရတာ - Spyware ဝင်တာမျိုးတွေပါ နောက်ဆက်တွဲ ဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။ အဲလိုတွေ ဖြစ်လာတော့ အရင်က ကိုယ်တန်ဖိုးထားရတဲ့ Account မှာ သုံးရတာ မပျော်တော့ဘူး – အဲ့တာကြောင့် အခြားတစ်ခုကို ပြောင်းသုံးချင်ပေမယ့်လည်း သူငယ်ချင်း ဆွေမျိုးသားချင်းရဲ့ Nick တွေကလည်း အများကြီး ရှိနေတော့ ပြောင်းဖို့ကလည်း ခက်နဲ့ စိတ်ဆင်းရဲရတတ် ပါတယ် -
အခုလို ဖြစ်ရခြင်းရဲ့ အဓိက အကြောင်းအရင်းဟာ ကိုယ့်အတွက် တကယ်အရေးမပါ / အမြဲလည်း ဝင်ဖြစ်မှာ မဟုတ်တဲ့ Websites တွေ ဖိုရမ်တွေမှာ တစ်ခါလောက်လေး ရောက်ဖြစ်ယုံနဲ့ Registration လုပ်မိတဲ့ မိမိအပြစ်ကြောင့်ပါ – ကိုယ့်အတွက် တကယ်လည်း အရေးပါပြီး အမြဲတမ်း ရောက်ဖြစ် ပတ်သတ်နေမယ့် ဖိုရမ်တွေ - Websites တွေမှာ ကိုယ်အမြဲသုံးနေကျ Email address ကို ပေးပြီး Registration လုပ်တာ အကြောင်းမဟုတ်ပေမယ့် အမြဲ မရောက်ဖြစ်မယ့် Sites တွေကို လိုလားချက်တစ်ခုတည်း အတွက်နဲ့ Registration လုပ်တဲ့အချိန်မှာ Personal Email Address ကို မပေးမိဖို့ သိပ်အရေးကြီးပါတယ် – အဲ့လိုဆိုရင် ဒီ Email Address မှ မပေးရရင် ဘယ် Email Address ပေးရမလဲ နောက်တစ်ခု အသစ်ထပ်လုပ်ရမှာလားဆိုတဲ့ အမေးတွေ ရှိလာပါပြီ – အဲ့အတွက် အဖြေရှိပါတယ် -
( 1 ) 10MinuteMail
10MinuteMail ဟာ တစ်ခါသုံး Email Address တွေကို ( ၁၀ ) မိနစ်တစ်ခုကျ ထုတ်ပေးနေတဲ့ Disposable Email Service တစ်ခုပါ - ဖိုရမ်တွေ – Websites တွေမှာ Registration လုပ်ဖို့ Email အရေးပေါ်လိုလာပြီ ဆိုရင် ကိုယ်အမြဲ မဝင်မသုံးဖြစ်မယ့် Sites မျိုးတွေအတွက် 10MinuteMail ကနေ ၁၀ မိနစ်ခံ Email Address တစ်ခု ရယူပြီး Registration လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ် – ၁၀ မိနစ်ခံ Email ဆိုပေမယ့် သူပေးထားတဲ့ အချိန်တွင်းမှာ Registration confirmation link ရောက်မလာခဲ့သေးဘူးဆိုရင် သူသတ်မှတ်ထားတဲ့ ၁၀ မိနစ်မပြည့်မီ နောက်ထပ် ၁၀ မိနစ် – ၁၀ မိနစ်စီ တိုးတောင်းလို့ ရပါတယ် - တကယ်လို့ တိုးမတောင်းခဲ့ရင်တော့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ ၁၀ မိနစ်အတွင်းမှာ ကိုယ့်ကိုထုတ်ပေးထားတဲ့ ၁၀ မိနစ်ခံ Email Address ကို ဖျက်သိမ်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ် -
(2) OneWayMail
10MinuteMail ထက်စာရင် OneWayMail က ပိုသုံးလို့ ကောင်းတယ်လို့တောင် ကျွန်တော် ထင်မိတယ် – အကြောင်းက တစ်ခါသုံး Email Address လိုလာတဲ့အချိန်မှာ 10MinuteMail လိုမျိုး သူ့ဆိုဒ်ကို သွားစရာမလိုပဲ Registration လုပ်တဲ့နေရာမှာ XYZ@onewaymail.com ဖြစ်ဖြစ် abc@onewaymail.com ဖြစ်ဖြစ် @onewaymail.com ရဲ့ ရှေ့မှာနှစ်သက်ရာ စာလုံးထည့်ပြီး Registration တန်းလုပ်လိုက်လို့ ရပါတယ် – ပြီးရင် Website ကနေ ပြန်လာမယ့် Registration confirmation link ကိုစောင့်ဖို့ http://onewaymail.com/ ကိုသွား အောက်မှာ မြင်ရတဲ့ အတိုင်း ကိုယ်ပေးလိုက်တဲ့ နာမည်ကို @onewaymail.com ရဲ့ ရှေ့က box မှာ ရိုက်ထည့်ပြီး Go လိုက်တာနဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ Virtual Mail Box ထဲကို ရောက်သွားပါလိမ့်မယ် -
အထဲရောက်တာနဲ့ Registration confirmation link က အသင့်စောင့်ကြိုနေပြီး အဲ့ကနေ ကိုယ့် Registration ကို အဆုံးသတ်နိုင်ပါပြီ – ( ၃ ) ရက်ကြာပြီးသွားရင်တော့ Inbox ထဲက စာတွေကို OneWayMail က အလိုလျောက် ဖျက်သွားပါလိမ့်မယ် -
(3) TrashMail
TrashMail ကတော့ ကျွန်တော်သုံးဖူးသမျှ တစ်ခါသုံး Email Services တွေ ထဲမှာ Feature အများဆုံး Email Services လို့ကို ဆိုနိုင်ပါတယ် – သူ့ရဲ့ အကောင်းဆုံး အားသာချက်ကတော့ တစ်ခြား Disposable Email Services တွေလိုမျိုး Email address ပေးပြီးရင် သူ့ Website ကိုသွားပြီး Confirmation links ကို စောင့်စရာမလိုဘူး – သူ့ဆီမှာ ကိုယ့်ပေးချင်တဲ့ နာမည်နဲ့ တစ်ခါသုံး Custom Email Address တစ်ခုလုပ်ပြီး – Real Email Address နေရာမှာ ကိုယ့် Email address အစစ်ကိုထည့်ပေးလိုက်ရင် ရပါပြီ
ပြီးရင် ကြိုက်တဲ့ Websites – ဖိုရမ်မှာ Registration လုပ် – Email Address တောင်းရင် ခုနက လုပ်ထားတဲ့ တစ်ခါသုံး Mail Address ကိုထည့်ပေးလိုက်ရင်ရပါပြီ – အဲလိုဆိုရင် ကိုယ် Registration လုပ် လိုက်တဲ့ ဆိုဒ်ကနေပြီး Registration confirmation link ကို တစ်ခါသုံး Mail Address ဆီ လှမ်းပို့ပေးမယ် – အဲလိုရောက်လာတဲ့ စာကို TrashMail ကနေပြီး ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Real Email ဆီ Forward ပြန်လုပ်ပေးမယ် – အဲ့ဒီ့နည်းနဲ့ ကိုယ်အမြဲသုံးမယ့် Real Email Address ကို ကာကွယ်နိုင်ပါတယ် – ကိုယ်ဖန်တီးခဲ့တဲ့ တစ်ခါသုံး Mail Address ကိုတော့ ဘယ်နရက်နေရင် ဖျက်ပစ်စေချင်လဲ ဆိုတာကိုပါ အထက်ဖော်ပြပါအတိုင်း စိတ်ကြိုက် သတ်မှတ်ထားနိုင်ပါသေးတယ် -
ဒီအကြောင်းအရာကို ရေးရခြင်းရဲ့ အဓိကရည်ရွယ်ချက်က ကိုယ့်ရဲ့ တန်ဖိုးရှိတဲ့ အမြဲသုံးနေကျ Email Address ကို တန်ဖိုးထားတတ်စေဖို့နဲ့ မလိုလားအပ်ပဲ Inbox ထဲကို ဝင်လာတတ်တဲ့ Spam messages တွေရဲ့ ရန်ကနေ မိသားစုဝင်များ ကာကွယ်နိုင်အောင် ဖြစ်ပါတယ် -
ဒီနေ့တော့ တော်တော်များများ သိထားပြီးသား အကြောင်းအရာ သေးသေးလေး တစ်ခုကို အကျယ်ချဲ့ပြီး ဆွေးနွေးကြည့်ချင်ပါတယ် - ဖိုရမ်အတွက် တစ်ခြား အကြောင်းအရာ တစ်ခု ရေးနေရာကနေ ဒီအကြောင်းက မရေးလို့ မဖြစ်လို့ အရင်စရေးလိုက်တာပါ - Screen Capturing Tool ဆိုတာ မှန်ရာပြောရရင် ကျွန်တော် ကွန်ပြူတာ စသုံးခဲ့စဉ်ကာလကနေ အချိန်တော်တော်ကြာတဲ့အထိ ဘာမှန်း မသိခဲ့သေးဘူး - သုံးရကောင်းမှန်း မသိတာလည်းပါတယ် - Screen Capturing Tool ဆိုတာထက် တစ်ခုခုကို Screenshot ဖို့ဆိုရင် keyboard မှာပါတဲ့ Prt Sc ဆိုတဲ့ Print screen ကိုပဲ အမြဲ အားကိုးခဲ့တာ
Window မှာပါတဲ့ Print screen ဆိုတာ ကျွန်တော်တော့ သုံးလို့ရယုံ အဖြစ်ထည့်ထားတဲ့ သဘောလောက်ပဲလို့ ထင်မိတယ် - ဘာလို့လည်းဆို Print screen key ကို သုံးပြီး Screenshot ဖူးသူတိုင်း သိပါလိမ့်မယ် - သူ့ key ကို နှိပ် နောက် mspaint ကို run ကနေ ခေါ် paste လုပ် - ပြန် save အဆင့်က ( ၄ ) ဆင့်လောက် လုပ်နေရတယ် - ဒီကြားထဲ ကိုယ်လုပ်ထားတဲ့ screenshot မှာ တစ်ခြား စာလေး ဘာလေး effect လေး ထပ်ထည့်ချင်ရင် mspaint က အဆင်မပြေတော့ဘူး - ဒါပေမယ့် Windows7မှာပါတဲ့ mspaint ကတော့ အရင်ကထက် စာရင် တော်တော်လေး သုံးရ အဆင်ပြေလာတာ သတိထားမိတယ် -
ဘာကြောင့် Screen Capturing Tool ကို သုံးသင့်သလဲ
အဲ့တော့ ကျွန်တော်တို့တွေ Screen Capturing Tools တွေအကြောင်း အကြမ်းဖျဉ်း မိတ်ဆက်ပြီးတဲ့ နောက်မှာ Screen Capturing Tool ကို ဘာကြောင့်/ဘယ်အချိန်မှာ သုံးသင့်လဲဆိုတဲ့ အကြောင်းအရာ က စဉ်းစားဖို့လိုလာပါပြီ - Screen Capturing Tool တွေကို ဖိုရမ်မှာ ဆွေးနွေးချက်တစ်ခုခု စတင်ရေးသားတဲ့ အခါ ကိုယ်ရေးသားတဲ့ အကြောင်းကို ဖတ်ရှုလေ့လာသူတွေ မြင်သာသိလွယ်အောင် သရုပ်ဖော်ပုံတွေနဲ့ ဝေဝေဆာဆာ တင်ပြချင်တဲ့အခါမှာဖြစ်စေ – ဖိုရမ်မိသားစုဝင် တစ်ယောက်ယောက် ကွန်ပြူတာနဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ ပြဿနာတစ်ခုခုဖြစ်လို့ ကိုယ်ကိုယ်တိုင် ဝင်ရောက် ကူညီဖြေရှင်းပေး ချင်တဲ့အခါ လုပ်ဆောင်ချက် အကြောင်းအရာကို သိလွယ်မြင်သာအောင် သရုပ်ပြ လမ်းညွှန်ချင်တဲ့ အခါမှာဖြစ်စေ - မိမိကွန်ပြူတာမှာ အခက်အခဲ တစ်စုံတစ်ရာရှိလာလို့ ဖိုရမ်မှာ အကူအညီတောင်းချင်တဲ့ အချိန်မှာ ကူညီပေးမယ့်သူ မြင်သာအောင် errors တွေကို ဖော်ပြချင်တဲ့ အခါမှာဖြစ်စေ Screen Capturing Tool တွေကို အသုံးပြုပါတယ် -
ဥပမာဆိုကြပါစို့ - တစ်စုံတစ်ယောက်က ကျွန်တော် မြန်မာမိသားစုဖိုရမ်ကို မသွားတတ်လို့ လမ်းညွှန်ပေးပါ ခင်ဗျ ဆိုရင် - ကျွန်တော်တို့ ဘယ်လို လမ်းညွှန်ကြမလဲ ?? Browser ကိုဖွင့်ပါ - Address bar မှာ http://www.myanmarfamily.org ဆိုတဲ့ URL ကိုရိုက်ပြီး Enter ခေါက်ပါ - မြန်မာမိသားစုဖိုရမ်ဆိုတဲ့ Webpage ပေါ်လာရင် ဘယ်ဘက်ခြမ်း ခေါင်းစဉ်အောက်နားမှာ ရှိနေတဲ့ ပင်မအချက်အလက်များအောက်က မြန်မာမိသားစုဖိုရမ် ဆိုတဲ့ link ကနေ ဝင်ပါ ဆိုတာမျိုးထက် - အောက်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်း Screen Capturing Tool တစ်ခုခုကိုသုံးပြီး သွားရမယ့် နေရာကို Screenshot ဖော်ပြလိုက်တာက ပိုပြီး ထိရောက်မယ် မဟုတ်ပါလား -
ဒီ သဘောတရားက Screen Capturing Tool တွေကို အသုံးပြုရခြင်းရဲ့ အသက်ပါပဲ - Screen Capturing Tool ကို သုံးခြင်းအားဖြင့် အကြောင်းအရာ အများကြီးကို စီကာပတ်ကုံး ပြောပြနေဖို့ မလိုသလို လိုချင်တဲ့ Target ကို လေ့လာသူတွေ အလွယ်တကူနဲ့ နားလည်နိုင်စေပါတယ် - ဒီ သဘောကို အခြေခံပြီး မိသားစုဝင်များလည်း ဖိုရမ်မှာ ကွန်ပြူတာနဲ့ ပတ်သတ်လို့ အခက်အခဲ တစ်ခုခု ရှိလာတဲ့ အချိန် မေးမြန်းတဲ့ အခါ ကျွန်တော့် ကွန်ပြူတာကြီး ဘာဖြစ်သွားမှန်း မသိလို့တို့ / သုံးနေရင်း ဘာ Errors တွေတက်နေမှန်း မသိတော့ဘူး ကူညီပါအုံး ဆိုတဲ့ မေးခွန်းမျိုးတွေ မမေးကြပဲ - လတ်တလော ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ အနေအထားကို ဝိုင်းဝန်းကူညီပေးမယ့်သူတွေ မြင်သာအောင် Screenshot နဲ့ တကွ ဖော်ပြပေးကြဖို့အကြံပြုလိုပါတယ် -
အသုံးပြုသင့်သော Screen Capturing Tools များ
Screen Capturing Tools တွေနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး တစ်ချိန်က ကျွန်တော် 2010 2011 Ultimate Software Guide for Windows Users ထဲမှာ သုံးဖို့သင့်မယ့် Screen Capturing Tools နှစ်ခုအကြောင်း ကို မိတ်ဆက်ပေးခဲ့ဖူးပါတယ် - ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း အချိန်တော်တော်များများမှာ စာရေးဖြစ်တိုင်း အဲ့ဒီ့ Tools နှစ်ခုထဲက တစ်ခုမဟုတ် တစ်ခုကို အမြဲသုံးလေ့ ရှိခဲ့တယ် - Snagit နဲ့ FastStone Capture ပေါ့ - အကြမ်းဖျဉ်း သုံးသပ်ရရင် FastStone Capture က ပေါ့ပြီး သုံးရလွယ်တယ် - Snagit က နဲနဲလေးပြီး features ပိုစုံတယ် - သူ့ အားသာချက်နဲ့ သူတော့ ရှိကြတယ် - ဒါပေမယ့် သူတို့နှစ်ခုလုံးဟာ Freeware မဟုတ်ကြဘူး - သုံးချင်ရင် keys တို့ crack တို့ ရှာသုံးရတယ် - keys တို့ crack တို့ဆိုတာ ရှာရတာ ဘာမှ မခက်လှပါဘူး - ဒီအကြောင်းကို အင်တာနက်အတွင်း Software ရှာဖြွေခင်း ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်အောက်မှာ ကျွန်တော် တော်တော်များများကို ရေးခဲ့ပြီးပြီ - အလကားမပေးတာတွေထဲက ကိုယ်ဘယ်လိုမှ မတတ်နိုင်တဲ့ Applications အကြီးစားတွေကို Crack လုပ်ပြီးသုံးတာ သဘာဝကျပေမယ့် ကိုယ်တတ်နိုင်နေတဲ့ Applications အသေးအဖွဲလေးကအစ အလကားရအောင် လုပ်ယူပြီး သုံးတယ်ဆိုတာ လူ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုရဲ့ ရပ်တည်ရှင်သန်မှုကို ဖျက်ဆီးရာကျပါတယ် - ဒါ့ကြောင့် စွမ်းဆောင်ရည်ချင်း တူမယ်ဆိုရင် Shareware ကို crack လုပ်ပြီး သုံးမယ့် အစား freeware လေးတွေ ပြောင်းသုံးကြည့်နိုင်ကြစေဖို့ Screen Capturing Tools အမျိုးအစားများစွာထဲက အလကားရပြီး စွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းတဲ့ freeware တစ်ချို့နဲ့ မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ် -
( 1 ) Shotty
Shotty ကိုသုံးဖြစ်တာ သိပ်မကြာသေးဘူး - ဒါပေမယ့် freeware ဆိုတဲ့ နာမည်နဲ့ မလိုက်အောင် လိုချင်တာ အားလုံးနီးပါး ပြည့်စုံနေတော့ သဘောကျမိတယ် - Desktop တစ်ခုလုံးကို Screenshot မလား - Screen ပေါ်က rectangular region ကိုပဲ Screenshot မလား - Window တစ်ခုချင်း ကြိုက်ရာကိုပဲ ရွေးပြီး Screenshot မလား စိတ်ကြိုက် ရိုက်ယူလို့ ရတယ် - Screenshot ပြီးရင် သူပေးထားတဲ့ hosting ငါးခုထဲက နှစ်သက်ရာ တစ်ခုခုဆီကို တန်းပြီး upload တင်နိုင်ပါသေးတယ် -
သူ့ရဲ့ အကြီးမားဆုံး အားသာချက်တစ်ခုကတော့ screen captures လုပ်တဲ့ နေရာမှာ Windows Aero Glass effects ရအောင် captures လုပ်ပေးနိုင်တာပါ - အသေးစိတ် အချက်အလက်တွေကို ဒီနေရာမှာ သွားရောက်လေ့လာနိုင်ပါတယ် -
(2) PicPick
PicPick ကလည်း Personal use နဲ့ non-profit educational use အတွက် Free ပေးထားတဲ့ Screen Capturing Tool တစ်ခုပါ - သူ့ရဲ့ အပြင်အဆင်က mspaint နဲ့ ဆင်ပြီး mspaint ထက် သုံးရ ပိုကောင်းပါတယ် - သူ့ရဲ့ အားသာချက်က တစ်ခြား Tools တွေကို Registry နဲ့ System folder ထဲထိ access မလုပ်တဲ့ အတွက် သူ့ဖိုင်ကို USB ထဲထည့်သွားပြီး ရောက်ရာ ကွန်ပြူတာမှာ install လုပ်စရာ မလိုပဲ အသင့်သုံးနိုင်ပါတယ် - တစ်ခြား အသေးစိတ် အချက်အလက်တွေကို ဒီနေရာမှာ လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
(3) 7capture
Windows XP ရဲ့ program windows တွေမှာ rounded corners တွေ ရှိသလို တကယ်လို့ Windows7- Vista မှာ Aero ကို Enabled ပေးသုံးနေတာဆိုရင်လည်း အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း program windows တွေမှာ rounded corners ရှိတာ မိသားစုဝင်များ သတိပြုမိကြပါလိမ့်မယ် -
အဲ့ဒီ့ rounded corners တွေကို ကျွန်တော်တို့တွေ ပုံမှန် သုံးနေကျ print screen key ကိုသုံးပြီးဖြစ်ဖြစ် - တစ်ခြား အရည်အသွေးနိမ့်တဲ့ Screen capturing tools တစ်ခုခုကို သုံးပြီး capture လုပ်ရင် ဖြစ်ဖြစ် “rounded corners” တွေကို တိတိကျကျ Capture မလုပ်နိုင်ပါဘူး - ဒါ့ကြောင့် ပုံတွေနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး တိတိကျကျ အသေးစိတ် Screenshot ချင်တဲ့အခါ အပေါ်မှာ ဖော်ပြပြီးခဲ့တဲ့ Shotty - Snagit နဲ့ 7capture စတဲ့ အရည်အသွေးမြင့် Screen Capturing Tools တွေကို အသုံးပြုသင့်ပါတယ် - Normal Screen Capture နဲ့ Semi-Transparent Screen Capture ရဲ့ ကွာခြားချက်ကို အောက်ဖော်ပြပါ ပုံတွေမှာ အရည်အသွေးချင်း လေ့လာနိုင်ပါတယ် -
Normal Screen Capture
Semi-Transparent Screen Capture
(4) Greenshot
Greenshot ဟာ Windows အတွက် open-source screen capture tool တစ်ခုဖြစ်ပြီး တစ်ခြား Screen Capturing Tools တွေနည်းပါး စွမ်းဆောင်ရည်ရှိတဲ့ freeware တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ် - တစ်ခြား Screen Capturing Tools တွေလိုပဲ Screenshot လုပ်ပြီးသွားရင် ဖြတ်ညှပ်ကပ် လုပ်တာ လိုတာပေါင်းဖြည့်တာ စာထည့်တာ စသဖြင့် အားလုံးလုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ် -
(5) Office 2010
တစ်ချို့ သတိမထားမိကြတာလည်း ဖြစ်ကောင်း ဖြစ်ပါလိမ့်မယ် - ကျွန်တော်တို့ သုံးနေတဲ့ Office 2010 မှာလည်း built-in screen clipping utility ပါပါတယ် - နေရာတစ်ခုချင်းစီကို မြင်သာအောင် ဖော်ပြလိုက်ပါတယ် -
Screen clipping in Word 2010
Screen clipping in PowerPoint 2010
Screen clipping in Onenote 2010
အောက်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ Video ကတော့ Onenote2010 မှာပါတဲ့ built-in screen clipping utility ကို အသုံးပြုနည်းပါ -
Screen Capturing Tools တွေ အကြောင်းနဲ့ ပတ်သတ်လို့တော့ ဒီလောက်ပါပဲ - ခု ဖော်ပြခဲ့သလောက်ဆို လေ့လာသူ မိသားစုဝင်များ ဘယ်လို Screen Capturing Tool ကို အသုံးပြုသင့်မယ် - ဘာ့ကြောင့် အသုံးပြုသင့်တယ်ဆိုတာ သုံးသပ်နိုင်ကြလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်မိပါတယ် -
How can i contribute to Myanmarfamily ?
ကျွန်တော် မြန်မာမိသားစု ဖိုရမ်ကို ရောက်တာ တစ်နှစ်ကျော်ခဲ့ပြီ - ဖိုရမ်မှာ စာရေးရင်း လိုအပ်နေတာလေးတွေ အချိန်တိုင်း လိုက်ကြည့်ဖြစ်တယ် - လိုအပ်နေတာတွေကတော့ အများကြီးပေါ့လေ - ဒါပေမယ့် ဖိုရမ်တစ်ခု ရပ်တည်ရာမှာ မဖြစ်မနေ လိုအပ်တဲ့ အကြောင်းအရာလေးတစ်ခုကို ဖိုရမ်ဝင် မိသားစုများ သိရှိနိုင်အောင် သတိထားမိနိုင်အောင် အကြောင်းအရာ အများကြီးထဲက အချက်တစ်ချို့ကို ဒီနေရာမှာ ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ် - အဲ့တာတွေအားလုံးရဲ့ အနှစ်ချုပ်ကတော့ -
ဖိုရမ်တစ်ခုရဲ့ သဘောသဘာဝကို မိသားစုဝင်တော်တော်များများက အမေးအဖြေ ဆိုဒ်တစ်ခုလို ထင်နေကြတယ် - ဖိုရမ်ဆိုတာ အမေးအဖြေလုပ်ဖို့ တစ်ခုတည်း အတွက် တည်ထောင်ထားတဲ့ နေရာ မဟုတ်ပါဘူး - မသိတာလာမေး ပြီးရင်ပြန်ဆိုတာ အမေးအဖြေ ဆိုဒ်တွေရဲ့ သဘောသဘာဝပါ - ဖိုရမ်က အဲလိုဆိုဒ်တွေနဲ့ ရပ်တည်မှုခြင်း မတူပါဘူး - ဖိုရမ်ဆိုတာ လူအားလုံးရဲ့ အသိပညာ အတွေးအခေါ်နဲ့ အတွေ့အကြုံတွေကို စုပေါင်း မျှဝေတဲ့နေရာ - ကိုယ်သိထား တာတွေကို အခြေခံကျကျ ပြောပြမယ် - လေ့လာနိုင်မယ့် နေရာကောင်းတွေ လက်ဆင့်ကမ်းမယ် - တစ်ယောက်ယောက် အခက်အခဲရှိရင် ကိုယ်နားလည်ထားသလောက် ဝင်ပြောပေးမယ် - ကိုယ်မသိသေးတာတွေကိုလည်း တစ်ခြားသူတွေရဲ့ အတွေ့အကြုံ မျှဝေမှုတွေကနေ ရယူမယ် - ဒါက ဖိုရမ်တစ်ခုရဲ့ အသက်ပါ - ဒါကို မိသားစုဝင်အများစု အခုထိ ရုပ်လုံးမကွဲကြ သေးဘူး -
ကျွန်တော်တို့ ဖိုရမ်အပါအဝင် မြန်မာဖိုရမ်တော်တော်များများကို လိုက်ကြည့်ရင် ဆွေးနွေးချက်နဲ့ အမေးအဖြေဆို တစ်နေ့နဲ့ တစ်နေ့ ဆွေးနွေးချက်ထက် အမေးအဖြေက နေ့တိုင်းလိုလို ပိုတက်ပြီး ဆွေးနွေးချက်က ပျောက်ပျောက်နေတာ တွေ့နေရတယ် - အဲတာတွေက အားမနာတမ်း ပြောရရင် အလားအလာ မကောင်းဘူး - ဘာလို့လည်းဆိုတော့ -
ပြဿနာတစ်ခုကို ပြေလည်စေတာဟာ ပြဿနာ အားလုံးကို ပြေလည်စေမယ့် ဖြေရှင်းချက် မဟုတ်လို့ပါပဲ
ဝလုံးရေးတတ်ချင်တဲ့ ကလေးတစ်ယောက် ဝလုံးရေးတတ်တဲ့ ကျွန်တော်တို့ဆီကို ဝလုံးရေးနည်း လာသင်ပြီ ဆိုကြပါစို့ - ကျွန်တော်တို့ သူ့ကို ဝလုံးရေးတတ်သွားအောင် ဝလုံးရေးနည်း ဘယ်လိုသင်ပေးကြမလဲ ??
- ကျောက်သင်ပုန်း ကျောက်တံယူ - ကလေးကို ဒီမှာကြည့် "ဦး"/"ဒေါ်လေး" ဆွဲတာ - ပြီးရင် "ဦး"/"ဒေါ်လေး" ဆွဲသလို လိုက်ဆွဲဆိုပြီး သင်ပေးမလား ??
- ကျောက်သင်ပုန်း ပေါ်မှာ ကျောက်တံကို သူ့လက်နဲ့ သူ့ဘာသာသူ ကိုင်ခိုင်းပြီး ကိုယ်က ဘေးကနေ ပါးစပ်ပြောနဲ့ ဟိုလိုလုပ် ဒီလိုလုပ်နဲ့ သင်မလား ??
- ကျောက်သင်ပုန်း ကျောက်တံပေါ်မှာ သူ့လက်ကို ကိုယ့်လက်နဲ့ ထပ်ကိုင် စနစ်တကျ နေသားချပေးပြီး - ညာလက်နဲ့ ဝလုံးရေးရင် မှားတတ်တဲ့ အမှား - ဘယ်လက်နဲ့ ဝလုံးရေးရင် မှားတတ်တဲ့ အမှား - ခဲတံ အနေအထားနဲ့ လက်ကိုင်အသုံးပြုပုံ - လက်ကောက်ဝက် အနေအထားနဲ့ စာလုံးဆက်စပ်မှု ဆိုတဲ့ ဝလုံးရေးဆွဲနည်း ဥပဒေသတွေ အားလုံးကို နားလည်လွယ်အောင် ရှင်းပြ သင်ပေးမလား ??
အဲ့တော့ ဘယ်သင်ကြားနည်းကို ကျွန်တော်တို့ ရွေးကြမလဲ ??
Contributors များ၏ အခန်းကဏ္ဍ
ဝလုံးရေးနည်း ဆိုတာ တကယ်တော့ ကျွန်တော်တို့ စာရေးတတ် ဖတ်တတ်လာအောင် သင်ခဲ့ရတဲ့ ပညာရပ်တစ်ခုလုံးရဲ့ အဦးဆုံး အခြေခံ - ဝလုံးရေးနည်းတောင် ကလေးတစ်ယောက် စနစ်တကျ တတ်မြောက်သွားဖို့ ဒီလောက် အချိန်ပေးရရင် ဖိုရမ်ဆိုတဲ့ ပညာရပ်စုံတဲ့ နယ်ပယ်တစ်ခုမှာ မသိနားမလည်သေးတဲ့ လေ့လာသူတွေကို လက်တွဲခေါ်နိုင်ဖို့ ကျွန်တော်တို့ ဒီ့ထက်ပိုပြီး အချိန်ပေးကြရမယ် -
( ၁ ) ကူညီလိုစိတ်မွေးပါ
လူတိုင်း လူတိုင်း မွေးကတည်းက ပါလာတာ ပျင်းတဲ့ရောဂါ - လူတိုင်း ပျင်းတတ်တယ် - ကျွန်တော်လည်း ပျင်းတယ် - တစ်ခုခု သိချင်တယ် ဒါပေမယ့် ရှာရမှာ ပျင်းတယ် - တစ်ခုခု နားလည်ချင်တယ် ဒါပေမယ့် ဖတ်ရမှာ ပျင်းတယ် - ဖိုရမ်ကို ရောက်လာတော့ မေးခွန်းတွေ အများကြီး တွေ့ရတယ် - အဲ့ကျတော့လည်း ဖြေဖို့ ပျင်းပြန်ရော - ပျင်းတယ်ဆိုတာထက် တစ်ချို့ အကြောင်းအရာ တွေက မှန်ရာပြောရရင် ကိုယ်တိုင်လည်း အပေါ်ယံကြောလောက်ပဲ သိတာ - အတွင်းကျကျ မသိဘူး - အဲတာကို ပြန်ရှင်းဖို့ဆိုရင် အတွင်းကျကျ သိနိုင်ဖို့ စာပြန်လိုက်ဖတ်ရတယ် - အဲ့ကျတော့ ပျင်းလို့ မရတော့ဘူး - ဒါကို ကျွန်တော်တို့က ကူညီလိုစိတ် မွေးတယ်လို့ ခေါ်တယ် - ကိုယ့် အခက်အခဲ မဟုတ်ပေမယ့် တစ်ခြားသူတစ်ယောက်ရဲ့ အခက်အခဲကို တတ်နိုင်မယ်ဆိုရင် ကူညီနိုင်ဖို့ ကြိုးစားကြည့်ပါ - ငါက ဘာမှမှ မသိတာဆိုတဲ့ စကားလုံးနဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် အကျဉ်းချ မပစ်လိုက်ပါနဲ့ - ငါက ဘာမှမှ မသိတာဆိုတဲ့ အတွေးမျိုး တွေးတတ်ရင် ငါသူတို့ထက် စာပိုဖတ်ဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့ အတွေးမျိုး တွေးမိဖို့လည်း သိပ်အရေးကြီးပါတယ် - ဖိုရမ်ကို ရောက်ဖြစ်တုန်းခဏ အင်တာနက် လက်တစ်ကမ်း ရှိတုန်းအချိန်မှာ ကိုယ်သိထားတာတွေထဲက ဘယ်အကြောင်းအရာပဲ ဖြစ်ပါစေ တစ်ခုတစ်လေလောက် မျှဝေနိုင်ဖို့ ကြိုးစားကြည့်ပါ - အဲ့ဒီ့ မျှဝေမှုကနေ လက်ဆုပ်လက်ကိုင် ပြနိုင်စရာ ဆုလာဒ်ကောင်းတစ်ခု ရဖို့ မသေချာပေမယ့် လိုအပ်လေ့လာ သူတွေကနေပေးမယ့် မေတ္တာတရားကိုတော့ အတိုင်းအဆမရှိ ရရှိပါလိမ့်မယ်။
( ၂ ) အလှမ်းကျယ်ပါစေ သို့သော် ...
လူတိုင်း အောင်မြင်ချင်တာပဲ - လူတိုင်း ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်ချင်တာပဲ - လူတိုင်း လူထင်ကြီး မခံရရင်တောင် လူထင်သေးမခံချင် ကြတဲ့ သူချည်းပဲ - ဒီစိတ်မျိုး ကျွန်တော့်မှာ ရိှသလို မိသားစုဝင်တိုင်းမှာလည်း ရှိတယ် - ဒါပေမယ့် အဲ့စိတ်ကို ခုခေတ် လူငယ်တွေမှာ ရှိနေတဲ့ စိတ်နဲ့ ချိန်ထိုးကြည့်တော့ အများကြီး လွဲမှားနေတာ သွားတွေ့ရတယ် - မြန်မာလူငယ်တွေ အောင်မြင်ချင်တာ ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်ချင်တာတော့ တအားပဲ - ဒါပေမယ့် တော်တော်များများ က ဖြတ်လမ်းနည်းနဲ့ အောင်မြင်ချင်နေကြတယ် - ဥပမာ ပေးရရင် Computer နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ဆိုကြပါစို့ Programmers တို့ Game developers တို့ Web designers တို့ စသဖြင့် အောင်မြင်တဲ့ သူတွေ တွေ့ရင် သူတို့လို ဖြစ်ချင်လိုက်ကြတာ တအား - သူတို့လို ဖြစ်ချင်ရင် သူတို့ဘယ်လို ကြိုးစားခဲ့လဲ သူတို့ ဒီလို ဖြစ်လာဖို့ ဘယ်လောက် ရင်းနှီးပေးဆပ်ခဲ့ရလဲ - အဲတာတွေသိပြီးရင် ငါဘယ်လို ပြင်ဆင်သင့်သလဲ ဆိုတာ အရင်မလေ့လာဘူး - ဖြတ်လမ်းနည်းနဲ့ အခြေခံဘာမှမသိပဲ ကိုယ့်ကိုယ်ဆရာတစ်ဆူလို အထင်ခံ ရအောင် လုပ်ချင်နေကြတယ် - ပြောရရင် အလှမ်းကျယ်ပြီး အလယ်လပ် နေကြတာပေါ့ - ဒီလိုဖြစ်နေတာ လူငယ်တွေရဲ့ အပြစ်မဟုတ်ဘူး - အဲတာ လူကြီးတွေရဲ့ အပြစ် - ဘာလို့လည်းဆို တတ်ပြီးသိပြီးသား လူတွေက မတတ်သေး မသိသေးသူတွေ လေ့လာနိုင်အောင် အခြေခံကို ပြန်ဆင်းပြီး ဘယ်သူမှ တော်ယုံ မရှင်းပြကြတော့ဘူး - ကျွန်တော် ကွန်ပြူတာနဲ့ ပတ်သတ်ခဲ့တဲ့ ကာလတစ်လျှောက်မှာ ဘာမှမဟုတ်တဲ့ အခြေခံလေးတွေကို မြန်မာလို မဖတ်ရပဲ - အင်္ဂလိပ်လို လိုက်ဖတ်နေရတာ အများကြီး - အင်္ဂလိပ်လိုဖတ်ရတာ ဘာမှ မဖြစ်ပါဘူး - မြန်မာလူမျိုး အဲ့လောက် အင်္ဂလိပ်စာ ညံ့တဲ့သူ တစ်ယောက်မှ မရှိဘူး - အားလုံး ဖတ်နိုင်တယ် - ဒါပေမယ့် သိထားဖို့ ကောင်းတာ ကျုပ်တို့ ခု အင်္ဂလိပ်လိုဖတ်နေတဲ့ စာတွေထဲက တစ်ချို့ အကြောင်းအရာတွေ ဟာ သူများနိုင်ငံမှာ အခြေခံ အဆင့်လောက်တည်းက သိခဲ့တာတွေဗျ - ဒါတွေ ဘာလို့ ကျွန်တော်တို့ မသိခဲ့လဲ - ငါ့တုန်းကလည်း ဒီလိုပဲ အင်္ဂလိပ်လို ဖတ်ခဲ့တာပဲ - မင်းသိချင်ရင်လည်း အင်္ဂလိပ်ဖတ်ပေါ့ ဆိုတဲ့ လူကြီးတွေကြောင့် ကျွန်တော်တို့ သိသင့်တဲ့ အရွယ်မှာ ဒီ အခြေခံ အဆင့်တွေကို မသိခဲ့တာ - ဒါတွေကို အခုမှ ဒရောသောပါး လိုက်ဖတ်နေရတော့ သူများနိုင်ငံကသူတွေ ဟော တစ်စင်း ဟောတစ်စင်းနဲ့ အာကာသပေါ် ယာဉ်ပျံတွေ တက်နေတဲ့ အချိန် ဒီကလူတွေက ခုချိန်ထိ Browser ဆိုသည်မှာ - Torrent ဆိုသည်မှာ လုပ်နေရတယ် - ကျွန်တော်တို့တွေ Basic မရှိပဲ Advance ကို ကျော်တက်ချင်လို့ မရဘူး - အဲတာကို မမေ့ကြပါနဲ့ - မြန်မာလူမျိုးထဲမှာ Advance ပိုင်းကို ကောင်းကောင်းရေးနိုင်တဲ့သူတွေ အများကြီး ရှိတယ် - ဒါပေမယ့် Advance ပိုင်းကို ရောက်ပြီးသားသူတွေဆိုတာ တော်တော်များများ ဘယ်သူမှ Basic ပိုင်းကိုပြန်ရေးဖို့ စိတ်မကူးချင်ကြတော့ဘူး - ဒါ သူတို့ အပြစ်မဟုတ်ဘူး - သူတို့က Advance ပိုင်းကို ကောင်းကောင်းရေးနိုင်နေပြီမို့လို့ အလယ်အလတ် သိနေတဲ့ သူတွေကို Advance ပိုင်းကို ဆွဲခေါ်သွားလိမ့်မယ် - ကျွန်တော်တို့က ကိုယ့်လောက်မသိသေးတဲ့ လူငယ်တွေကို အလယ်အလတ် လောက် နားလည်တဲ့ အဆင့်ထိ Basic ကနေဆွဲခေါ်မယ် - အဲ့တာကြောင့် ဘယ်အကြောင်းအရာ ကိုရေးရေး တတ်နိုင်သမျှ အသေးစိတ်ပြီး ရေးပေးကြပါ - ကျွန်တော်တို့ လူမျိုးတွေ အဓိက လိုနေတာ အခြေခံပါ - အခြေခံကို နားလည်သွားတဲ့ လူငယ်တွေဟာ Advance ပိုင်းကို ဘယ်လိုသွားရမယ်ဆိုတာ သူတို့ကိုယ်သူတို့ ပိုင်းဖြတ်သွားနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါ့ကြောင့် အလှမ်းကျယ်ကျယ် လှမ်းဖို့ ကြံတဲ့ အခါတိုင်း အလယ်မလပ်စေဖို့ ကိုပါ ဂရုပြုကြဖို့ အသိပေး လိုက်ပါရစေ။
( ၃ ) တို့ကနန်း ဆိတ်ကနန်း မလုပ်ပါနှင့်
တစ်ချို့က ကူညီချင်တယ်ဆိုတာထက် - ဒါလေးများ ငါတောင်သိတယ်ဆိုတဲ့ မသိစိတ်က ပညာဝင်ပြချင်တာ - ဒါလေးများကွာ ဟိုဟာကို ဟိုလိုလုပ်ပြီး ဒီဟာကို ဒီလိုလုပ်လိုက်ပေါ့ ဆိုတဲ့ နှစ်ကြောင်းလောက် ဝင်ရေးတာဟာ ကိုယ့်အတွက် ဘာမှမပင်ပန်းပေမယ့် လေ့လာသူကို ဇဝေဇဝါဖြစ်စေသလို - သိမ်ငယ်စိတ်ပါ စိုးမိုးစေပါတယ် - အဲလို တို့ကနန်း ဆိတ်ကနန်း ဆွေးနွေးမှုတွေကြောင့် နောက် ဆက်တွဲဖြစ်လာတဲ့ ပြဿနာတွေက Thread တွေ ဖောင်းပွ တယ် - တကယ်တန်ဖိုးရှိတဲ့ Thread တစ်ခုကို တို့ကနန်း ဆိတ်ကနန်း Thread က ဖုံးပြီး နောက်လူတွေကလည်း တို့ကနန်း ဆိတ်ကနန်းကိုပဲ အဟုတ်လိုထင် - သူတို့ဆွေးနွေးတဲ့ အချိန်ကျရင်လည်း တို့ကနန်း ဆိတ်ကနန်းတွေပဲ လုပ်လာကြ - ပြည့်ပြည့်စုံစုံ ဝင်ပြောပေးတ့ဲသူကပဲ ဆရာကြီး ဝင်လုပ်သလိုလို - လူ့စိတ်က ကောင်းတာမြင်ရင်သာ အတုခိုးဖို့ ခက်တာ မကောင်းတာ မြင်ရင်ကျ မကောင်းမှန်း သိနေတာတောင် အလိုလို အတုခိုးမိလျက်သွား ဖြစ်နေကြရော - သိချင်လို့ မေးတဲ့လူခမျာလည်း အေးလေ ငါကလည်း ဒါလေးတောင် မသိဘူး - သူတို့ပြောတော့လည်း လွယ်လွယ်လေးလိုပဲ ဆိုတဲ့ အတွေးနဲ့ ဖိုရမ်ကနေ Reply သာရသွားတယ် သိချင်တာကို ဂဃနဏ မသိရ - ဘာလုပ်ရမှန်းမသိပဲ လေ့လာချင်စိတ်ကုန်ပြီး စိတ်ဓာတ်ပျက်သွားတတ်ကြတယ် - အဲ့တာကြောင့် မိသားစုဝင်များ မေးမြန်းချက် အကြောင်းအရာ တစ်ခုနဲ့ ပတ်သတ်လို့ ဝင်ရောက်ဆွေးနွေးချင်တာဖြစ်ဖြစ် - တစ်ခြားသူ ဆွေးနွေးထားတာ မရှိသေးလို့ ( သို့တည်းမဟုတ် ) ဆွေးနွေးထားတာ မတွေ့မိလို့ ကိုယ်ကစပြီး ဆွေးနွေးချင်ပြီဆိုရင် တတ်နိုင်သလောက် တို့ကနန်း ဆိတ်ကနန်း မလုပ်ကြပါနဲ့ - မရေးကြပါနဲ့ - ကိုယ်တိုင်လည်း မသိ - လေ့လာ ရမှာလည်း ပျင်းတယ်ဆိုရင် တို့ကနန်း ဆိတ်ကနန်း ဝင်ဆွေးနွေးမယ့် အစား လက်ရှောင် နေလိုက်ပါ - ဒီစကားက မသိရင် ဝင်မရေးရဘူးလို့ ဆိုလိုတာ မဟုတ်ပါဘူး - ကိုယ့်စိတ်က တစ်ခုခု ပြောပြလိုက်ချင်တယ် - ကူညီလိုက်ချင်တယ်ဆိုတာ သေချာရင် တစ်ခြားသူအတွက်လည်း တကယ်အကျိုးရှိအောင် ကိုယ်သိထားတာကို စာလေးနည်းနည်းပြန်ဖတ် အကိုးအကားလေးနဲ့ ဆွေးနွေးပေးပါ - နည်းနည်းလောက် သိထားတယ်ဆိုရင် ကိုယ်သိထားသလောက်ကို တိတိကျကျ ချပြပြီး - ပြည့်ပြည့်စုံစုံဆွေးနွေး ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ သိထားတာကို နောက်ထပ် အကိုးအကား လေ့လာနိုင် မယ့် နေရာတွေ - Screenshots တွေ Screencasts တွေနဲ့ပါ စုပေါင်းပြီး ဆွေးနွေးပေးကြ စေလိုပါတယ်။
( ၄ ) လူထင်ကြီး မခံရသည်ကို မြတ်နိုးပါ
ခေါင်းစဉ်ကို ဖတ်ရင် နည်းနည်းထူးဆန်းနေလိမ့်မယ် - ကျွန်တော် ကြုံခဲ့ဖူးတဲ့ လူတော်တော်များများဟာ သူတို့ ဘာပဲလုပ်လုပ် လူထင်ကြီးခံရအောင် လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ အလုပ်တစ်ခုကို လုပ်တယ်ဆိုတာမျိုး မရှိသလောက်ရှားကြတယ် - ဒါပေမယ့် လူ့စိတ်ဆိုတာ ဆန်းတယ် - လူထင်ကြီးခံရအောင် ကျွန်တော်တို့ လုပ်နေကြတာ မဟုတ်ပေမယ့် အခြားဘက်မှာ ကိုယ့်မသိစိတ်က ကိုယ်တစ်ခုခု လုပ်လိုက်ရင် လူထင်သေးခံရမလား ဆိုတဲ့ ကြောက်စိတ် အမြဲရှိနေတယ် - အဲ့စိတ်ကြောင့်ပဲ လူထင်သေးမခံရအောင် လုပ်ရင်းနဲ့ နောက်ပိုင်းမှာ လူထင်ကြီးခံရအောင် မသိစိတ်က လုပ်မိလျက်သား ဖြစ်သွားတတ်ပါတယ် - ဘာလို့လည်းဆိုတော့ လူထင်သေးမခံရအောင် လုပ်ရတာက ခက်ပြီး - လူထင်ကြီးခံရအောင် လုပ်ရတာက သိပ်လွယ်လို့ပါ - ခက်တာဆိုရင် လူ့သဘာဝက ဘယ်သူမှ အပင်ပန်းခံပြီး နေ့စဉ်ရက်ဆက် မကြိုးစားချင်ဘူး - အဲ့ဒီ့ စိတ်ကို ဦးစားပေးမိတာတွေ များလာတဲ့ အခါ နောက်ပိုင်းကိုယ့်ရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေက လူထင်သေးမခံရအောင် ကြိုးစားနေတဲ့ စိတ်မျိုးကနေ ငါဟာ မသိတာ မရှိဘူး - သူတို့ ဘာမေးမေး ငါသိတယ်ဆိုတဲ့ ပုံစံမျိုး လူထင်ကြီးခံရအောင် လုပ်ဆောင်နေတဲ့ လူတစ်ယောက်အဖြစ် ပုံသွင်းခံလိုက်ရတယ် - အဲ့နောက်မှာ ဘာတြွေဖစ်လာမလဲဆိုတော့ ကိုယ် လူထင်သေးမခံရအောင် ကြိုးစားခဲ့စဉ် တစ်ချိန်တုန်းက ကိုယ့်ကို တစ်ခဲနက် အားပေးထောက်ခံခဲ့တဲ့ သူတွေအားလုံး ကိုယ့်ကို စွန့်ခွာသွားတာ ခံရမယ် - လူတွေရဲ့ အထင်ကြီးတာ ခံရပြီး အမြင့်ကို ရောက်တဲ့ အချိန်ကျတော့မှာ ကိုယ့်ကို စွန့်ခွာသွားတာခံရတော့ အမြင့်ကိုရောက်လေ အကျနာလေ ဆိုတဲ့ စကားက ပေါ်လာတယ် - တကယ်တော့ ကျွန်တော်တို့ လူထင်ကြီး ခံရသည် ဖြစ်စေ - မခံရသည်ဖြစ်စေ ကိုယ့်လုပ်ဆောင်ချက် ကိုယ်တတ်နိုင်သလောက် အကောင်းဆုံး ကြိုးစားနေဖို့ပဲ လိုပါတယ် - လူထင်ကြီး မခံရတာ ပြဿနာ မရှိပါဘူး - ဖြစ်နိုင်ရင် လူထင်ကြီးမခံရတာလေးကိုပဲ မြတ်မြတ်နိုးနိုး ဖက်တွယ်ပြီး ကိုယ်လုပ်စရာ ရှိတာတွေကိုပဲ အကောင်းဆုံး လုပ်ဆောင်ဖြစ်အောင် ကျွန်တော်တို့ Contributors တွေ ကြိုးစားနေကြဖို့ပဲ လိုပါတယ်။
( ၅ ) လူမကြောက်ပါနှင့်
ဒီအကြောင်းကိုတော့ ပြောချင်ခဲ့တာ တော်တော်ကိုကြာပါပြီ - ဖိုရမ်မှာ မိသားစုဝင် တစ်ယောက်ယောက် ဆွေးနွေးချက်တစ်ခု စရေးတော့မယ်ဆိုရင် ဆွေးနွေးချက် မစခင်တည်းက -
ကျွန်တော်/ကျွန်မကတော့ ဖိုရမ်မှာ အခုမှ စရေးဖူးတာပါ - အရင်က တစ်ခါမှ မရေးခဲ့ဖူးတာမို့လို့ အမှားပါရင် ခွင့်လွှတ်ပေးစေ ချင်ပါတယ် - ခုပြောမယ့် အကြောင်းကို သိထားပြီးသူလည်း ရှိပါလိမ့်မယ် - ဒါပေမယ့် မသိသေးတဲ့သူတွေ အတွက်ပါ - သိပြီးပြီး သူများအတွက် မရည်ရွယ်ပါဘူး - နားလည်ပြီးသူများ ကျော်သွားနိုင်ပါတယ် - အမှားတွေပါရင်လည်း ခွင့်လွှတ်ပေးပါ
စသဖြင့် ... အကြောင်းအရာတစ်ခု အစမပျိုးခင်တည်းက တောင်းပန်စကားတွေ အရမ်းများနေတာ သတိထားမိပါတယ် - ကျွန်တော် မိသားစုဝင်များကို အသိပေးချင်တာ ဖိုရမ်ဟာ စာစစ်ဌာန မဟုတ်ပါဘူး - တစ်ခြားဖိုရမ်မှာ ဘယ်လို ကြီးကြပ်တယ် ကျွန်တော် မသိပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ ဖိုရမ်မှာ သိစေတတ်စေ နားလည်စေလိုတဲ့ စေတနာနဲ့ ကိုယ်တိုင်အချိန်ပေးပြီး အားတတ်သရော ရေးတင်ထားတဲ့ စာကို ဘယ် အုပ်ချုပ် ကြီးကြပ်သူတွေကမှ မျက်လုံးဒေါက်ထောက်ကြည့်ပြီး အမှားမရှာပါဘူး - ရေးပါ လွတ်လွတ်လပ်လပ် ရေးပါ - ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ဆွေးနွေးပါ - မိသားစုစိတ်ဓာတ်နဲ့ ရင်းရင်းနှီးနှီး နွေးနွေးထွေးထွေး အမှားတွေ့ခ့ဲရင်လည်း ထောက်ပြပါ - လူကြောက်ဖို့ မလိုပါဘူး - တကယ်လို့ ကိုယ့်ဘက်က စေတနာအပြည့်နဲ့ တတ်စွမ်း သလောက် အချိန်ပေးပြီး ကိုယ်တိုင် ဆွေးနွေးပေးနေတာကို ကဖျက်ယဖျက်သဘောနဲ့ ပညာဝင်ပြချင်တဲ့သူတွေ့ရင် ကျွန်တော်တို့ အုပ်ချုပ် ကြီးကြပ်သူတွေရော မိသားစုဝင်တွေရော အားလုံး အမဲဖျက်သလို ဖျက်ပေးမယ် - လုံးဝ စိတ်မပူပါနဲ့ - စေတနာ မှန်ဖို့ပဲ လိုပါတယ် -
အနှစ်ချုပ်အနေနဲ့ Contributors များရဲ့ အခန်းကဏ္ဍမှာ Contributors အားလုံးကို ကျွန်တော် နောက်ဆုံး အကြံပြုချင်တာ ကတော့ -
ပြဿနာအားလုံးကို ပြေလည်စေမယ့် နည်းလမ်းဟာ ပြဿနာအားလုံးကို လိုက်လံဖြေရှင်းပေးတဲ့နည်းလမ်း မဟုတ်ပါဘူး - ပြဿနာဖြစ်ပေါ်စေမယ့် လမ်းကြောင်းအားလုံးကို ကြိုတင်တားဆီး ကာကွယ်တဲ့နည်းလမ်းပါ
မိသားစုဝင်များ - Contributors များ ဒါကို မမေ့ကြပါနဲ့ - ဆွေးနွေးချက်ကို များများရေးပါ - ဝိုင်းဝန်းဆွေးနွေးပါ - စုပေါင်း အဖြေရှာပါ - နားမလည်တာတွေကို ထပ်မေးပါ - ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်း သူများပြောတိုင်း မယုံပါနဲ့ - အဲ့လူပြောတဲ့ အဖြေကို ကိုယ်ကိုယ်တိုင် စာလိုက်ဖတ်ပြီး သေချာမှု ရှိမရှိ ဆန်းစစ်ပါ - ဒါဟာ ပြဿနာအားလုံးနီးပါးကို ဖြေရှင်းပေးဖို့ မလိုတဲ့ ကြိုတင်တားဆီးကာကွယ်မှု နည်းလမ်းပါပဲ -
ဇန်နဝါရီလ ၁၅ ရက် ၂၀၁၁ ခုနှစ်
ဒီနေ့ ချစ်သူ သက်တမ်း ( ရ ) နှစ်ပြည့်
- ဖြတ်သန်းပြီးခဲ့တဲ့ နှစ်တွေကို နောက်ပြန်ငဲ့ကြည့်တော့ ဘာမှ သိပ်မကြာခဲ့သေးသလိုပဲ - ဒါပေမယ့် ငါတို့ နှစ်ယောက်လုံး တော်တော် ပင်ပန်းခဲ့ကြတယ် - ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ငယ် - ( ရ ) နှစ်တာ ဖြတ်သန်းပြီးခဲ့တဲ့ ကာလမှာ ငါတို့ နှစ်ယောက် တစ်ခါမှ စိတ်မကောက်ခဲ့ကြဖူးဘူး - စိတ်မဆိုးခဲ့ကြဖူးဘူး - ရန်မဖြစ်ခဲ့ကြဖူးဘူး - အဆုံးအစွန်ဆုံး လေသံမာမာတောင် မပြောခဲ့ကြဖူးဘူး - သူတို့တွေကို ပြောပြဖြစ်တိုင်း ကြည်နူးရတယ် - သူတို့ အံ့သြကြတယ် - ငယ် - မင်းက ပြောတယ် - ကိုနဲ့ ချစ်သူဖြစ်ရတာ ကံကောင်းသတဲ့ - ဘယ်ဟုတ်ပါ့မလဲ - တကယ်ကံကောင်းခဲ့တာ ငါပါ -
- နှစ်ယောက်တူတူသွားတိုင်း မင်းကို သက်တောင့် သက်သာနဲ့ ပို့ပေးနိုင်မယ့် ကားမျိုး ငါ့မှာ မရှိသေးဘူး - ဒါပေမယ့် မင်း ငါနဲ့ တူတူ ဘတ်စ်ကားပဲ လိုက်စီးခဲ့တယ်
- ငါ့အိတ်ကပ်ထဲမှာ ကုန်လုနီးနီး ဖြစ်နေတတ်တဲ့ ပိုက်ဆံကို ငါ သတိမရမိအောင် မင်းအတွက် ဘာမှ မလိုအပ်သလို မင်း ဟန်ဆောင်နေတတ်တယ်
- ဘာလိုလဲဆို မလိုဘူး
- ဘာစားချင်လဲဆို ဗိုက်မဆာသေးဘူး
- ဘယ်သွားချင်လဲဆို ကိုသွားချင်တဲ့နေရာ လိုက်မယ်
တကယ်တမ်း ပြန်စဉ်းစားကြည့်တော့ - မင်းလိုအင်ကို ငါဖြည့်ဖြစ်ခဲ့တာထက် ငါ့လိုအပ်ချက်တွေ ငါ့ စိတ်ဆန္ဒတွေကိုပဲ မင်းအမြဲ ဖြည့်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့တာပါ - အချစ်အကြောင်းကို ချစ်တယ်လို့ မင်းကို ပြောခဲ့တုန်းက ခပ်ပေါ့ပေါ့ပဲ - လိုချင်တဲ့ အရာတစ်ခုကို ရအောင်ဝယ်ထားလိုက်ချင်တဲ့ ကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ တပ်မက်မှုမျိုးပဲ ငါ့မှာ ရှိခဲ့တာ - တဖြေးဖြေး နှစ်တွေ ကြာလာတော့ အချစ် တစ်ခုရဲ့ နက်ရိှုင်းမှုကို သိလာတယ် - ဒါပေမယ့် သိရင် ပြောပြပါလားဆို ငါ မပြောပြတတ်ဘူး - ငါ ပြောလိုက်မယ့် စကားထဲမှာ ပါသွားမယ့် စကားလုံးတွေက မင်းကို သိပ်ချစ်တဲ့ ငါ့သွေးထဲက ခံစားချက်တွေကို လိုက်မမှီမှာ စိုးလို့ပါ -
မင်းကို အဲ့လောက် ချစ်တယ်ငယ် -
ဘဝမှာ အဖြစ်ချင်ဆုံး အရာလို့ မေးရင် လူတိုင်းမှာ အဖြေတစ်ခုစီ ရှိမှာပဲ - ငါ့မှာလည်း ရှိတယ် - အဲ့ အဖြေက အမြဲတမ်း ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်တိုင်းကို ယုံကြည်နေတဲ့ မိန်းမတစ်ယောက် မင်းကို ဖြစ်စေချင်တာပဲ
- မင်းဟာ ငါ့အတွက်နဲ့ မပူပင်စေရဘူး
- မင်းဟာ မင်းမိသားစုအတွက် မပူပင်စေရဘူး
- မင်းဟာ မင်းဘဝရှေ့ရေးအတွက် မပူပင်စေရဘူး
- မင်းဟာ မင်းရဲ့ အနာဂတ်တိုင်းကို မင်းကိုယ်တိုင် စိတ်ကြိုက် ပုံဖော်နိုင်ခွင့်ရှိတဲ့ မိန်းမမျိုး ငါ ဖြစ်စေချင်တယ်
ငါက မင်းကို ချစ်တယ် - မင်းက ငါ့ကို ယုံတယ် - ယုံကြည်မှုနဲ့ ပေါင်းစပ်ထားတဲ့ ချစ်ခြင်းတရားဟာ အနာဂတ်ကို ကြိုမြင်နိုင်စွမ်း မရှိပေမယ့် - အနာဂတ်ကို ထိုးဖောက်နိုင်စွမ်းရှိတယ် ငယ် - အဲ့ဒီ့ အားနဲ့ ငါတို့ ရှေ့ဆက်ကြရအောင် - ဘဝနှစ်ခုဆုံးတဲ့ ထိပေါ့ -
Webpages For Offline Browsing
ခု ဒီဘက်ခေတ်မှာ အင်တာနက်က တဖြည်းဖြည်းနဲ့ တော်တော်နေရာယူလာပြီ - ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံမှာလည်း တစ်ချိန် အင်တာနက် စသုံးခါ စက လူငယ်တွေ chatting တက် - လေပန်းတဲ့ အဆင့်ကနေ အင်တာနက်သုံးပြီး ဘလော့တွေ ရေးလို့ရတာ - ကိုယ်သိချင်တဲ့ အကြောင်းအရာ တွေ စဉ်ဆက်မပြတ် လေ့လာနိုင်တာ တဖြည်းဖြည်း ပိုပြီး နားလည် လက်ခံလာကြပြီ - ဘာကြောင့် ဒီလို ပြောလဲဆို တစ်ချိန်က မြန်မာ နည်းပညာဆိုဒ်တွေ ဘလော့တွေ ကြည့်လိုက်ရင် အရမ်းကို လူဝင်နည်းတယ် - စာရေးသူက ဝါသနာပါလို့ ရေးနေပေမယ့် ဖတ်မယ့်သူ သိပ်မရှိ ဘူး - များသောအားဖြင့် Person တို့ mIRC တို့မှာလောက်ပဲ လူစီတာ - ခုနောက်ပိုင်းကျတော့ နည်းပညာဆိုဒ်တွေ သတင်းရေးတဲ့ ဘလော့ တွေမှာ ကြည့်လိုက်ရင် လူငယ်တွေ ကျိတ်ကျိတ်တိုးပဲ -
Chatting လောကကို ကိုယ်တိုင်လည်း ကြုံခဲ့ဖူးလို့ တိကနဲ ဖြတ်ဖို့ ကျွန်တော် မတိုက်တွန်းပါဘူး - ဒါပေမယ့် လတ်တလော အင်တာနက် သုံးနေတဲ့ လူငယ်တွေ ကိုယ့် အခြေအနေကို တစ်ချက် ပြန်စဉ်းစား ကြစေချင်တယ် -
ငါ တစ်သက်လုံး အင်တာနက်ရတဲ့ နေရာမှာ နေပြီး - အပူအပင် အကြောင့်အကြ မရှိ keyboard နဲ့ computer လေးပဲ ကိုင်နေရမယ့် သူလား ??
မိသားစုဝင် တော်တော်များများ နိုင်ငံခြားမှာ နေကြတဲ့သူ ရှိတယ် - တစ်ချို့ မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာ - ဘယ်မှာပဲ နေနေ ကျွန်တော်တို့တွေ လတ်တလော ထိတွေ့နေတဲ့ အင်တာနက်က သိပ်တန်ဖိုးကြီး ပါတယ် - ဥပမာ ပြောရရင် အလုပ်လုပ်ဖို့ နိုင်ငံခြား ရောက်လာတဲ့သူ - ကျောင်းတက်ဖို့ နိုင်ငံခြား ထွက်လာတဲ့သူ စသဖြင့် ရပ်တည်မှု အမျိုးမျိုးရှိနဲ့ အင်တာနက်ကို ထိတွေ့နေကြပေမယ့် ကိုယ့်မှာ ဒီလို အဆင်ပြေပြေ အင်တာနက် သုံးနေနိုင်မယ့် ရက် ဘယ်နရက် ကျန်သေးလဲ ပြန်တွက်ကြည့်ကြပါ - နိုင်ငံခြား အခြေချဖို့ ဆုံးဖြတ်မထားရင် ၄ - ၅ - ၆ နှစ်ထက် ဘယ်သူမှ မပိုဘူး - အလွန်ဆုံး ၁၀ နှစ် - ခုလို အင်တာနက်ကို အပူအပင် အကြောင့်အကြ မရှိ အဆင်ပြေပြေ သုံးနေနိုင်မယ့် နှစ်တွေမှာ တစ်နေ့ကို chatting အတွက် ၄ - ၅ နာရီ ပေးနိုင်ရင် အင်တာနက်ထဲက ကိုယ်ဝါသနာပါရာ အကျိုးရှိမယ့် စာ တစ်နေ့ကို တစ်ပုဒ်လောက် ဖတ်ဖို့ အချိန်မပေးသင့်ဘူးလား ??
ဒီလို စဉ်းစားမိတော့ မြန်မာနိုင်ငံက မိသားစုဝင်တွေအတွက်ရော - နိုင်ငံတကာမှာ အင်တာနက်ကြေးကို လစဉ် ပိုက်ဆံထည့်သုံးနေရတဲ့ လူငယ်တွေ အတွက်ပါ အခက်အခဲတစ်ခု သွားမြင်မိပါတယ် - အဲတာက ကိုယ်လေ့လာချင်တဲ့ အကြောင်းအရာကို အချိန်ပြည့် ဖတ်ရှုနိုင်ဖို့ အင်တာနက်ကြေး မတတ်နိုင်ကြတဲ့ ပြဿနာပါ - တစ်ချို့ဆို လေ့လာချင်တယ် - အင်တာနက်ဆိုင် ရောက်တဲ့ အချိန်လေး တစ်နာရီ နှစ်နာရီလောက်ကို ကုတ်ကပ်ပြီး စာဖတ်ရတယ် - အင်တာနက်ကြေး အများကြီး မတတ်နိုင်တော့ တစ်နေ့ နည်းနည်း - နည်းနည်း နဲ့ နေ့တိုင်း လာဖတ်ရအောင်လည်း မတတ်နိုင်သလို - ပိုက်ဆံ အများကြီးပေးပြီး တစ်နေကုန် ထိုင်ဖတ်ဖို့လည်း မတတ်နိုင်ပြန်ဘူး - ခုလို လေ့လာလိုသူ လူငယ်တွေ အတွက် အချိန်နည်းနည်းပေးပြီး အများကြီး လေ့လာနိုင်အောင် Offline Browsing အကြောင်း ဒီနေရာမှာ ဆွေးနွေးပေးသွားပါ့မယ် -
Offline Browsing ဆိုတာ Websites တစ်ခုလုံးကို internet connection မရှိပဲ မူလအခြေအနေအတိုင်း ကြည့်လို့ရတဲ့ အနေအထားဖြစ်အောင် ဖန်တီးခြင်းကို ခေါ်ဆိုတာပါ - ဒီလို Offline Browsing လုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့ ဆိုရင် ကိုယ်ဖတ်ချင်တဲ့ Website က အကြောင်းအရာတွေအားလုံးကို ကိုယ့်စက်ထဲမှာ download ချထားဖို့ လိုပါတယ် - ဆိုလိုတာ Website တစ်ခုလုံးကို offline ကြည့်ဖို့ စက်ထဲ copy ကူးထည့်ထားတဲ့ သဘောမျိုးပေါ့ - website တစ်ခုလုံးကို ဒေါင်းလုပ်ချရမှာ ဖြစ်တဲ့ အတွက် သတိထားသင့်တာ ကိုယ် download ချမယ့် ဆိုဒ်က အကြောင်းအရာ အရမ်းမများပဲ ကျစ်ကျစ်လျစ်လျစ် ရှိတဲ့ site မျိုး ဖြစ်ဖို့လိုပါတယ် - အကြောင်းအရာနဲ့ ဖော်ပြချက် အရမ်းများတဲ့ site မျိုးကို ဒေါင်းလုပ်ချမိရင် Hard disk မှာ နေရာမလောက်တဲ့ ပြဿနာမျိုး ကြုံလာနိုင်သလို - Site မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ Content အနည်းအများနဲ့ ကိုယ်သုံးနေတဲ့ Connection speed ကိုလိုက်ပြီး Downloading time ကလည်း သာမန်ထက် ကြာမြင့်သွားနိုင်ပါတယ် - ဒါ့ကြောင့် Websites တွေကို Offline Browsing လုပ်ဖို့အတွက် download ချမယ်ဆိုရင် ပထမဆုံး သိထားရမယ့် တစ်ချက်က mall websites ဖြစ်ဖို့ လိုတယ်ဆိုတဲ့ အချက်ပါ -
Offline websites အဖြစ် ဖန်တီးခြင်း
သဘောတရားရေးရာကို မိတ်ဆက်ပေးပြီးတဲ့နောက်မှာ Websites တွေကို Offline Browsing ဘယ်လို လုပ်ဆောင်မယ်ဆိုတာ ဆက်ပြီး ဖော်ပြသွားပါမယ် -
( 1 ) Fresh WebSuction - သူက Website တစ်ခုမှာ ရှိတဲ့ Web pages တွေနဲ့ web contents ( reference material, software files, online books, ... ) တွေအားလုံးကို offline viewing လုပ်လို့ ရအောင် Website တစ်ခုလုံးကို Download ချပေးနိုင်ဖို့ ကူညီပေးပါတယ် - အင်တာနက်ဆိုင်ကို တစ်နေ့တစ်ခါ လာပြီး စာဖတ်ဖို့ မလိုတော့သလို - တစ်နေကုန် အင်တာနက်ကြေး အများကြီးပေးပြီး စာထိုင်ဖတ်ဖို့လည်း မလိုတော့ဘူးပေါ့ - ကိုယ် ဖတ်ချင်တဲ့ website က အကြောင်းအရာအားလုံးကို ဒေါင်းလုပ်ချသွားပြီး အိမ်မှာ အေးအေးဆေးဆေး offline ဖတ်ယုံပါပဲ -
Photo from topsoftzone.com
သူ့ရဲ့ UI က အသုံးပြုရလည်း လွယ်ပြီး Address ကိုထည့် Download ချယုံပါပဲ - software က 100% free - no spyware ပါ - နောက်ပြီး download ချတဲ့နေရာမှာ ဘယ် file types နဲ့ ဘယ် file extensions ကိုပဲ ချမယ်ဆိုပြီး Fresh Websuction မှာ ကန့်သတ်ထားလို့ ရပါတယ် - File types တွေကတော့ - HTML, Images, Audio, Video, Documents, Archived, စတာတွေနဲ့ File extensions တွေကတော့ - htm, html, shtm, shtml, htms, htmlx, asp, pl, stm, stml,idc, htx, xsp, xml, cfm, cgi, htmp, php, php3, nsf, jsp, aspx ဆိုတာတွေပါ - အသုံးပြုနည်း အသေးစိတ်ကို >> Softoxi.com က လုပ်ထားတဲ့ WebSuction Video Tutorial မှာကြည့်နိုင်ပါသေးတယ် -
(2) BackStreet Browser - သူကတော့ free အသုံးပြုခွင့်ပေးထားတဲ့ offline browser ပါ - အသုံးပြုတာကတော့ Website တစ်ခုလုံး ဒေါင်းလုပ်ချဖို့ ဖြစ်ဖြစ် - Site ထဲက ကိုယ်စိတ်ဝင်စားတဲ့ အစိတ်အပိုင်း တစ်ပိုင်းလေးလောက်ကိုပဲ ဒေါင်းလုပ်ချဖို့ ဖြစ်ဖြစ် အသုံးပြုနိုင်ပြီး နောင်တစ်ချိန်မှာ offline browsing အနေနဲ့ ပြန်လည်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ် -
သူ့ရဲ့ ထူးခြားချက်တွေက download ချပြီးသွားရင် offline browsing လုပ်ရာမှာ အဆင်ပြေစေဖို့ web စာမျက်နှာပေါ်မှာ အချင်းချင်းချိတ်ဆက်ထားတဲ့ links တွေအားလုံးကို Hard drive ပေါ်မှာလည်း offline browsing အတွက် အသင့်အသုံးပြုနိုင်အောင် ပြန်လည်ချိတ်ဆက်ပေးပြီး - တကယ်လို့ Download ချနေတုန်း Connection ကျသွားတာ ဘာညာ ဖြစ်ရင်လည်း Connection ပြန်ရတဲ့ အချိန်မှာ ရောက်နေတဲ့ နေရာကနေ ဒေါင်းလုပ်ပြန်ချနိုင်စေဖို့ Resume Session လည်း ပါဝင်ပါတယ် -
(3) HTTrack - သူကလည်း Internet ပေါ်မှာ ရှိရှိသမျှ ဆိုဒ်တွေထဲက ကိုယ် Offline browsing လုပ်ချင်တဲ့ ဆိုဒ်တွေကို Download ချနိုင်ဖို့ ကူညီပေးနေတဲ့ freeware တစ်ခုပါ -
Download ချပြီးသွားရင်လည်း link-structure အားလုံးကို မူရင်းဆိုဒ်အတိုင်း ဖြစ်အောင် အသင့်ဖန်တီးပေးထားတာမို့လို့ offline browsing လုပ်ဆောင်ချိန်မှာ အခက်အခဲ မရှိ ပုံမှန်အတိုင်း အင်တာနက်ထဲ ကြည့်နေရသလို Internet connection မရှိပဲ လေ့လာနိုင်ပါတယ် - သုံးရတာ တစ်ခုခု အခက်အခဲ ရှိမယ်ဆိုရင် သူ့မူရင်းဆိုဒ်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ Manual မှာ အသေးစိတ်ကို လေ့လာနိုင်ပါတယ် -
(4) Internet Download Manager Grabber - လူသုံးနည်းသလို လူသိလည်း နည်းသေးတဲ့ Internet Download Manager ရဲ့ feature တစ်ခုက Site Grabber လို့ ခေါ်တဲ့ အင်တာနက် စာမျက်နှာပေါ်က websites တစ်ခုလုံးကို ဖြစ်စေ - site ရဲ့ အစိတ်အပိုင်း တစ်ခုခု ( all pictures fromaweb site, or all audio files fromaweb site ... ) ကို ဖြစ်စေ offline browsing အတွက် အသုံးပြုနိုင်အောင် Download ချလို့ ရတဲ့ feature ပါ -
အသုံးပြုနည်း အသေးစိတ်ကို ဒီနေရာမှာ သွားရောက် ဖတ်ရှုနိုင်ပါသေးတယ် -
တန်ဖိုးရှိသော မနက်ဖြန်တိုင်းအား အကျိုးရှိစွာ ဖြတ်သန်းနိုင်ကြပါစေ -
Can't Download Youtube Videos ?
Youtube ပြဿနာက တစ်ချို့လည်း သတိထားမိနေကြပြီ - တစ်ချို့လည်း သတိမထားမိကြသေးဘူး - သတိမထားမိတာ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာက မိသားစု တော်တော်များများက Youtube သိပ်မကြည့်ကြတာရော - ကျော်ကြည့်မှ ရတာမျိုးဆိုတော့ သိပ်မဝင်ဖြစ်ကြတာနဲ့ သတိမထားမိတာ ဖြစ်မယ် ထင်မိတယ် -
ခုနောက်ပိုင်း အရင်က ပေးထားတဲ့ Youtube video downloading applications တော်တော်များများ ( တော်တော်များများဆိုတာ အကုန်တော့ မဟုတ်သေး ) အလုပ်မလုပ်တော့ပါဘူး - ဘာလို့လည်း ဆိုတော့ Youtube (Google) က သူတို့ဆီမှာရှိတဲ့ favorite videos တွေကို သူတို့အတွက် အကျိုးအမြတ် တစ်ပြားတစ်ချပ် မရပဲ အလကားမတ်တင်း ဒေါင်းလုပ်ချနေကြတာကို လက်မခံနိုင်တော့လို့ပါ -
အဲတာကလည်း Youtube (Google) အပြစ်တော့ မဟုတ်ဘူး - သူတို့မလည်း တစ်နေ့နဲ့ တစ်နေ့ ဒီ သန်းနဲ့ချီတဲ့ Video clips တွေအတွက် ထိန်းသိမ်းခ ကုန်ကျစရိတ်တွေ ဆိုတာ ရှိသေးတယ် မလား - အဲတာကြောင့် ခုလို ဝင်ငွေရှာတဲ့ ဘက်ကို ကူးသွားတာပါ - ဒါပေမယ့် လောလောဆယ်တော့ Youtube video downloading applications တွေ သုံးလို့ မရဘူးလို့ ဆိုပေမယ့် တစ်ချို့ သုံးလို့ ရနေသေးတာတွေ ရှိသလို - ကျွန်တော် လက်ရှိသုံးနေတဲ့ Internet Download Manager v6.04 Build2ကလည်း Youtube ကနေ ဒေါင်းလုပ်ချလို့ ရနေပါသေးတယ် - ကျွန်တော် အရင် သတိထားမိသလောက် IDM မှာမှ 6.03 Beta အမြင့်ပိုင်း version တွေလည်း ရသေးတာ သတိထားမိပါတယ် - ဆိုလိုတာ Internet Download Manager v6.03 Beta 11 - Beta 14 စတာမျိုးတွေပေါ့ - Beta အနိမ့်ပိုင်း တွေတော့ ကျိန်းသေ မပြောတတ်ပါဘူး - Internet Download Manager v6.04 ကလည်း ကျွန်တော် သတိထားမိသလောက် လတ်တလော သိပ်မငြိမ်သေးဘူးဗျ - ခဏခဏ Key ပြဿနာ တက်နေတယ် - လတ်တလော ကျွန်တော်သုံးနေတဲ့ Internet Download Manager v6.04 build2နောက်အသစ်လေးတော့ ခုထက်ထိ ပြဿနာ မတက်သေးဘူး - လိုမယ်ဆို အောက်မှာ ယူလို့ရပါတယ် - အရင်တုန်းက သုံးခဲ့တဲ့ Cracked အဟောင်းကို Crack Updated On: January 11, 2011 မှ အသစ်လဲပြီးသုံး ထားတာမို့လို့ အားလုံးအဆင်ပြေလိမ့်မယ်လို့ ယူဆမိပါတယ် -
အဲ့တော့ ကျွန်တော်တို့ ပထမနည်းလမ်း အနေနဲ့ အပေါ်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ IDM နဲ့ Youtube က Video clips တွေ Download ချလို့ ရမယ် - ဒါ့အပြင်နောက်ထပ် နည်းတွေ ရှိပါသေးတယ် -
ဥပမာ ပြောရရင် -
- အဲ့ကို သွားရင် အဆင့်လေးဆင့် ထည့်ပေးရမှာ ရှိတယ်
Step ( 1 ) မှာ ကိုယ် Download ချချင်တဲ့ Youtube ရဲ့ URL ထည့် - နောက်တစ်ဆင့်မှာ ဘယ်လို ဖိုင်မျိုး လိုချင်လဲ ရွေး - နောက်တစ်ဆင့်မှာ သူက ကိုယ့်ဆီ Download link ပို့ပေးလို့ ရအောင် Email ထည့်ပေး - နောက်ဆုံး တစ်ဆင့်မှာ Convert ပေါ့ -
တစ်ခုရှိတာ က Email ပေးရင် ကိုယ် အမြဲသုံးတဲ့ Email အစား Secondary Email ထည့်ပေးတာ ပိုကောင်းပါတယ် - Secondary Email မှ ထည့်မပေးချင်ဘူးဆိုရင်လည်း 10minutemail.com က Email တစ်ခုကို ခဏယူသုံးပြီး ထည့်ပေးနိုင်ပါတယ် - ကောင်းတာကတော့ Secondary Email သုံးတာ ဒီနေရာမှာ ပိုကောင်းပါတယ် - ဘာကြောင့်လည်းဆို Zamzar က Download ချဖို့ Email ပို့ပေးမယ် ဆိုပေမယ့် လူအများနဲ့ လုပ်ဆောင်နေရတာမို့ စာအဝင် နဲနဲ ကြာတတ်ပါတယ် - 10minutemail.com က Email က 10 မိနစ်ခံ Mail ပါ - ဒါ့ကြောင့် ကိုယ်သွင်းပေးလိုက်တဲ့ Mail က 10 မိနစ်နေရင် ပျက်မှာမို့လို့ Zamzar ကနေ စာဝင်မလာခင် Mail ဖျက်သွားရင် လုပ်ထားသမျှ အလကားဖြစ်နိုင်ပါတယ် - အဲလို မဖြစ်ချင်ရင် 10minutemail.com မှာ မိနစ်ပိုတောင်းလို့ ရတာရှိသေးပေမယ့် စာရောက်မလာသေးတိုင်း မိနစ် တိုးတောင်းနေဖို့ကလည်း အဆင်မပြေပြန်ပါဘူး - ဒါ့ကြောင့် Secondary Email ကို သုံးစေချင်တာပါ - Secondary Email သုံးစေချင်တဲ့ တစ်ခြား အကြောင်းတွေ သိချင်သေးရင် ချစ်သမီးသို့ ပေးစာ အမှတ် ( ၁ ) ရှင်းပြထားတာ ရှိပါတယ် - လေ့လာကြည့်ပါ -
သူလည်း လတ်တလော အလုပ်လုပ်သေးတယ် - ဘာလို့လည်းဆိုတော့ သူက Webpage ကနေပြီး Video ကို တိုက်ရိုက် ဆွဲယူတာမို့လို့ -
သူကနေပြီးလည်း ကိုယ်ဒါင်းလုပ်ချချင်တဲ့ Youtube က Video clip ရဲ့ URL ကို paste လုပ်ပြီး download ချလို့ ရပါသေးတယ် - တစ်ခုချွင်းချက်ရှိတာ အဲလို ဆိုဒ်မျိုးတွေကနေ Youtube video ကို download ချချင်တယ်ဆိုရင် Java Runtime Environment စက်မှာ installed လုပ်ထားပြီး ဖြစ်ဖို့လိုပါတယ် - Java Runtime Environment က Free ပါ - ဖော်ပြထားတဲ့ နေရာမှာ ယူနိုင်ပါတယ် -
သူကလည်း KeepHD နဲ့ သဘောတရားချင်း ဆင်ပါတယ် - Java Runtime Environment စက်မှာ installed လုပ်ထားပြီး ဖြစ်ဖို့လိုပါတယ် - ကိုယ်ဒေါင်းလုပ်ချချင်တဲ့ Youtube က Video clip ရဲ့ URL ကို paste လုပ်ပြီး download ချချင်တဲ့ format ကိုရွေးပေးပြီး ဆက်သွားယုံပါပဲ -
သူကလည်း KeepVid နဲ့ သဘောတရားချင်း ဆင်ပါတယ် - Java Runtime Environment စက်မှာ installed လုပ်ထားပြီး ဖြစ်ဖို့လိုပါတယ် - ကိုယ်ဒေါင်းလုပ်ချချင်တဲ့ Youtube က Video clip ရဲ့ URL ကို paste လုပ်ပြီး download ချချင်တဲ့ format ကိုရွေးပေးပြီး ဆက်သွားယုံပါပဲ -
သူက website ကို သွားဖို့ မလိုဘူး - ကိုယ်ဒေါင်းလုပ်ချချင်တဲ့ Youtube Video clip ရဲ့ URL ရှေ့မှာ kiss ဆိုတဲ့ စာလုံးလေးလုံးရိုက်ပြီး Enter ခေါက်လိုက်ပါ - အဲလိုဆို သူ့ website မူရင်း စာမျက်နှာမှာ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ Video clip ကို ဒေါင်းလုပ်ချဖို့ အသင့် အနေအထားနဲ့ ရောက်သွားပါလိမ့်မယ် -
သတိပြုရန် !! - တစ်ခု သိထားဖို့က အထက်ပါ နည်းတွေ အကုန်လုံးဟာ Java Runtime Environment စက်မှာ installed လုပ်ထားပြီးသား ဖြစ်ဖို့လိုပြီး အောက်ဖော်ပြပါလိုမျိုး သတိပေးစာ တက်လာတဲ့ အခါ Always trust content from this publisher. မှာ အမှန်ခြစ်ပေးပြီး run ပေးဖို့ လိုပါတယ် -
တစ်ခြားနည်းလမ်းတွေလည်း ရှိသေးပေမယ့် ခုဖော်ပြခဲ့သလောက်ဆို Youtube ကနေ ဒေါင်းလုပ်ချဖို့ အဆင်ပြေနိုင်လိမ့်မယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ် -